खाना खाँदै गर्दा काँटावाला चम्चा जिब्रोमा अड्किएपछि... - Everest Dainik - News from Nepal
खाना खाँदै गर्दा काँटावाला चम्चा जिब्रोमा अड्किएपछि…
२०७७, ९ असार मंगलवार
काठमाडौंः व्यक्ति सोशल मिडियामा प्रसिद्ध हुन के गर्दैनन् ? केहि मानिसहरू मजाकको रुपमा केहि गर्छन्, जसले गर्दा उनीहरूका प्रियजनहरू सर्कलमा फस्न सक्छन् ।
यस्तै एक भिडियो युट्यूबमा धेरै प्रख्यात भइरहेको छ । भिडियोमा देखिएको छ कि काँटावाला चम्चा एक जना जवान व्यक्तिको जिब्रोमा अडक्यो र उसले पीडाले ठूलो स्वरले चिच्याउन थाल्यो ।
याे पनि पढ्नुस चुम्बन गर्दा जिब्रो टोकीदिए पछि...
जब उनका भाइहरूले काँटावाला चम्चा जिब्रोमा अडिएको देखे, तिनीहरूको होश उड्यो । सबै जना उसलाई मद्दत गर्न दगुरे । सबै डाक्टरहरू र एम्बुलेन्सहरूले जिब्रोबाट चम्चा कसरी हटाउने भनि सोच्न थाले ।
त्यस युवकले काँटावालाचम्चा जिब्रोमा अड्याए र यताउता दगुर्न थाल्यो र घरघरि बेस्सरी चिच्याउँदै थियो । जब उनका भाइहरूले उनको जिब्रोलाई भिडियो कलद्वारा उसका आमाबुबालाई देखाए, उनीहरूले जिब्रोबाट चम्चा हटाउन आग्रह गरे ।
याे पनि पढ्नुस शतकपछि रस टेलर किन निकाल्छन् जिब्रो बाहिर? यस्तो छ रोचक कारण
यसबीच जब सत्य प्रकाशमा आयो, मानिसहरूले यसलाई राम्रोसँग सुनेनन् । वास्तवमा, यो एउटा शरमको हिस्सा थियो । डोब्रे ब्रदर्स नामको युट्यूब पृष्ठमा, उक्त युवक नक्कली जिब्रोले शरारत गर्दछ । उसले नक्कली रबरको जिब्रोमा काँटा र चम्चा टाँसे ।
काँटावाला चम्चा जिब्रोमा अडिएको देखेर, आफ्नो भाइ मदतको लागि भाग्यो । तर सबै जना सत्य पत्ता लागेपछि रिसाए । अहिलेसम्म ३० लाख भन्दाबढी व्यक्तिले यस भिडियोलाई यूट्यूबमा हेरिसकेका छन् र हजारौं व्यक्तिले यसलाई सेयर गरेका छन् ।